Egwuregwu China Charmlite 16 oz. Egwuregwu rọba, Otu mkpọ a Reụ ọ Drinkụ 10ụ ngwugwu 10 maka ihe oriri, ihe omume, azụmaahịa, oriri agbamakwụkwọ, ihe omume DIY ma ọ bụ BBQ Picnics, enweghị ndị na-emepụta BPA (Blue) Charmlite
Egwuregwu Charmlite 16 oz. Epeepe rọba, Otu mkpọ a Drinkụ ọusụ 10ụ ugboro iri maka otu, ihe omume, azụmaahịa, oriri na ọ ,ụ ,ụ, ihe omume DIY ma ọ bụ ihe ngosi BBQ, Enweghị BPA (Blue)
Iko plastik Charmlite plastic pp zuru oke maka ịmepụta atụmatụ nke gị.
Jide ihe ọ favoriteụ favoriteụ kachasị amasị gị mgbe ị na-egosi njirimara gị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ! Anyị na-enye iko ndị a n'ọtụtụ agba na n'ọtụtụ ka ị wee nweta nweta akụ kachasị. A na-eji iko plastik plastik niile mee ihe dị ka 100% na-adịgide adịgide. DIY, mee ya onwe gị oru ngo, osimiri, ụbọchị ọmụmụ, ndị ọzọ, ihe omume, bachelor na bachelorette oriri, fraternities, sororities, agbamakwụkwọ, n'èzí, maa ụlọikwuu, BBQ si, nzukọ, fundraisers, ulo oru, nzukọ, monograms, ma ọ bụ naanị maka iji ụbọchị. Enwere otutu ohere na ojiji maka ngwaahịa a.
Emere iko iko mmanya ndị a ka ịghachị wee kwado ihe niile gbasara onwe gị, ụlọ ọrụ ma ọ bụ maka ịmebe aha gị. Nweta otu ngwungwu 10 maka obere nzukọ ma obu otutu ngwungwu iji kwadoo ndi buru ibu.
Ihe: PP (plastik)
Njirimara: BPA n'efu, ọkwa nri
Ike: 8oz / 12oz / 16oz / 20oz / 32oz
Agba & Logo: Ahaziri iche
Nnukwu maka ọrụ DIY, ịhazi osimiri, ụbọchị ọmụmụ, ma ọ bụ ihe omume bachelorette, na-eme ka mmemme sorority kọleji, ma ọ bụ tinye mgbakwunye agba na ozi echefu echefu maka oriri agbamakwụkwọ ma ọ bụ mmemme ngụsị akwụkwọ, ohere ịzụ ahịa na ika.
A di ya na oz iri na abuo, oz. 16, oz. 22, na 32 oz., Udiri ihe a nile n’eme bu ihe nzuzu maka i tinye akara ngosi, ihe oyuyo ma obu ihe ngosi ahia ma bia n’iru uto di iche iche di iche iche echefu echefu. ma ọ bụ ihe omume, gụnyere ojii, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, doro anya, odo, pink dị ọkụ na ndị ọzọ.
Kachasị mma Maka ome Obi &lọ & N'èzí (Akụkụ / Partlọ / BBQ / maa ụlọikwuu)
Iko 10oz IML PP
Iko 16oz PP
Uzo egwuregwu 22oz
Nke gara aga: Charmlite na-adigide, na-agbanwe agbanwe 16 oz BPA Free Plastic Cup, Na-a Dụ iko, Soda Cup - Recyclable Polypropylene (PP) - Opaque / Frosted Cup
Osote: Charmlite 1000ml abụọ na otu 2-1 pp plastic tea cup hazie iko pp siri ike na nnukwu efere nri na ahihia
Pp kọfị kọfị
Pp iko 16oz
Pp Reusable kọfị iko
iko pp plastik 22oz pp mmiri mmiri injec…
16oz plastic pp frosted iko eco-friendly na d ...
Mpempe Ejiji Ejiji Ejiji Ego Ego Reusable, Tumbler maka…
16oz PP ike plastic pp e biri ebi mmiri c ...
Echiche ọhụụ ohuru 2020 Amazon Reusable plastic…
Charmlite PP ihe eji egwuru egwu